एनआरएनए निर्वाचन : आचार्यले उम्मेदवारी नदिने, केसी र थापाबीच भिडन्त – News Portal of Global Nepali
एनआरएनए निर्वाचन : आचार्यले उम्मेदवारी नदिने, केसी र थापाबीच भिडन्त
लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघको आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षका उम्मेद्वार कुल आचार्यले संघमा देखिएको प्रतिनिधि विवाद समाधान नभएसम्म यसै महिनाको अन्त्यमा हुने भनिएको निर्वाचनमा आफूहरु सहभागी नहुने बताएका छन । तर डा बद्रि केसी र रबीना थापाले भने तोकिएको समयमा विधानसम्मत तरिकाले निर्वाचन गर्न आग्रह गरेको फ्रान्सबाट संचालित नेपालप्लेस डट कमले उल्लेख गरेको छ ।
आचार्यले संघ टुक्रिने कुरालाई भने अस्विकार गरेका छन् । “हामीले संस्था किन फुटाउनु पर्‍यो ? हामी विधानका कुरा गर्छौं । गैर आवाशिय नेपाली संघको इमेज राम्रो बनाउने कुरा गरिरहेका छौं । यदी कसैले विधिविधान विपरित गएर कुनै कृयाकलाप गरेको छ भने उसैले संघ फुटाउने चेस्टा गरेको छ । हो यस्तै कुरा हामीलाई स्विकार्य छैन ।”
तर एउटा पक्ष बाहिर रहेर हुने निर्वाचनले संस्थाको भविष्य कस्तो होला भन्नेमा भने अन्योल नै छ । तथापी निर्वाचन समितिले अध्यक्षका तिनै जना प्रत्यासीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलमामा ‘तपाईंले के भन्नु भयो ? भनेर हामीले अध्यक्षका एक प्रत्यासी डा बद्री केसीलाई सोधेका थियौं । उनले आफूले भन्नुपर्ने खासै कुरा नभएको बताउँदै भने “विधानअनुसार कार्य समितिले काम गर्न थालेको छ । निर्वाचन समितिले पनि काम गर्न थालेको छ । प्रतिनिधिका विषयमा विधान सम्मत रहेर काम गर्न अनुरोध गरेको छु ।”